Njengoba izingane, cishe bonke abantu bezwe kubazali babo ukuthi flying ephusheni - ziwuphawu oluhle. Ebusuku uyaphupha indaba enjalo ethi ingane ikhula nokuthuthukisa. Kungakhathaliseki sokuthokoza noma ukhathazeke umuntu omdala uma bebona iphupho enjalo? Kulula ukuqonda, ukukhumbula imininingwane phupho.
Flying ngamaphupho: phezulu naphansi
Ukukhumbula iphupho lakhe, nakanjani kuwufanele kokukhumbula isiqondiso indiza. Ngokuphawulekayo, uma emaphusheni abo ebusuku abantu sathandwa kuze phezulu, le ndaba uthembisa kuye ukuchuma kwezamabhizinisi. Flying ngamaphupho zingakufakazela ngamandla amaphupho, lowo mphuphi walelo owayekhaphele lapho evuka ukushaya phezulu kakhulu. It is hhayi ngaphandle ukuthi, "umnikazi" ukulala kuzothatha indawo yayo efanele emphakathini.
A iphupho lapho umuntu flying phansi, akusho azimhambeli kahle. Kungenzeka ukuthi amaphupho ebusuku nge icebo enjalo bawuhlobo isixwayiso ukuthi into embi okuzokwenzeka, ingozi. Flying at kokuwa phansi, kodwa akazange awe - iphupho kube kuhle kimi. Kungenzeka ukuthi lowo mphuphi walelo ulinde ukukhula umsebenzi, nempumelelo kungenzeka kwezinye izici zokuphila.
Flying ngamaphupho okufanele ibhekwe njengelungelo hle bika noma okubi? Kulula ukuqonda, kokukhumbula imizwa olutholwa ophuphayo emaphusheni ami. Kubi uma nangokwesaba, lokhu okuhlangenwe nakho ibonisa izinkinga ezingeni ngokobulili. Abanye abahlaziyi bakholelwa ukuthi ukukhathazeka ngesikhathi indiza ukhuluma ngani infantilism "umnikazi" wobuthongo, kuzama shift izinkinga wakhona kwabanye.
Ngokuphawulekayo, uma indiza iphupho ubephelezelwa injabulo, injabulo. Uma leli phupho kuziwa ebekezela, kuyodingeka ukuba balulame ngokushesha. Futhi ebusuku kwenjabulo uyaphupha athembisa nentuthuko engokomoya, ukuthuthukiswa kwenhlonipho isitebhisi umsebenzi, ngemvume amadili lesi sikhundla esinemali.
Islamic iphupho nencazelo
Akufanele yini ngenze ukuba ukhathazekile ngokuthi emaphusheni abo umuntu enomuzwa like inyoni liyachuma ngaphakathi the bhakabhaka? Le ndaba lithembisa ukuthi ukuphila kwangempela, lowo mphuphi walelo uyakwazi ukubonisa abanye amathalente abo ukuze bavuselele idumela isisulu. Uma "master" Ukulala sikhule amaphiko, okuyinto uyawasebenzisa ngesikhathi kushunqe, yena wayelindele izenzakalo ezihambisana nokuba ushintsho: umsebenzi omusha, eya kwelinye izwe, ezihambayo.
Kusho ukuthini endizela phezulu ephusheni, engenamaphiko. Islamic iphupho nencazo phikisana iphupho enjalo - a hle bika. Esikhathini esizayo esiseduze balindelwe ophuphayo ukuhumushela olimini lwesi-ngokoqobo iphupho lakhe.
Yini Freud sasho izinkulumo ngokuthi ingabe hle bika elihlobene ne iphupho ndiza? Flying indiza e ebusuku amaphupho, uma uthemba nokuchazwa wezengqondo abadumile, uthembisa 'ngenkosi' Ukulala wokwaneliseka ngokobulili. Nokho, kuphela uma kwenzeka ukuthi ukhonza njengomdala kakhulu imoto airliner.
Kanti kungokunye - ngendiza ngoba ummbila, iphupho uthi empilweni yangempela kubantu abaphethwe izinkinga ezihlobene sphere obuseduze. Ukusetshenziswa izindiza zempi ephusheni ebonisa ukuthi lowo mphuphi walelo niphaphame enalokho kuthambekela ungeqisi uthando abanalo ngokuwina.
Dream, liphefumulelwe indiza ye indiza esenzeka ngokoqobo - into njalo. Abahlaziyi abaningi bakholelwa ukuthi akufanele kuthathwe njengoba isibikezelo. Kunalokho, sokubonisa ukwesaba ukuthi abantu wazibonela uphapheme ngesikhathi indiza. Uma lowo mphuphi walelo empilweni yangempela neze uhlangabezana ukukhathazeka, ukugibela Egibela airliner, kodwa iphupho ihlangabezana imizwelo engakhi ngesikhathi air travel, kufanele wesabe ezamehlela ezingase ukuqeda kabi.
Akukhona nje izindiza uyakwazi esisesigabeni amaphupho abantu, kodwa futhi nezinye izindiza. Ngokwesibonelo, umuntu angabona ebusuku uyaphupha ngokwabo, undizisa nokujwayela-glider, indiza, ikakhulukazi uma lakhiwa umcabango. Kungenzeka ukuthi ephusheni ukusebenzisa izimoto enjalo zibonisa ukuthi empeleni ophuphayo wazithola esesimweni esibucayi. Muhle umatasa ukufuna amakhambi unconventional izinkinga, kodwa akukho senzo ukuba amsize abekezelele nalo.
Kungani baphupha indiza, uma indima indiza wenza parachute? Leliphupho elifanekisela yingozi "master" yakhe, uthi ikusasa lakhe engozini. Kungenzeka ukuthi lowo mphuphi walelo uhlose ungene into entsha, iqalisa adventure ezingabazisayo.
A indiza enophephela emhlane - iphupho ephazamisayo, uma usheshe ugxila ngokubona compilers yencwadi iphupho esoteric. Kungenzeka ukuthi lowo mphuphi walelo ukhohlisa abantu abaseduze (abangani, umndeni) ezingase ukuqeda kabi ngaye.
Nge isikhala futhi kungaba izindiza ahlobene ngephupho. Kusho ukuthini ezindiza iphupho kwi rocket, uma uthemba ngokubona compilers iphupho-izincwadi? emkhathini ngo abantu abaningi lihlotshaniswa imfihlakalo, romance, adventure. A iphupho ukuthi efakiwe rocket, nezithembiso eziningi ukushintsha ube umuntu ongcono. Kungenzeka ukuthi "umphathi" kwephupho maduze aphile aze abone ukugcwaliseka izinhlelo boldest, wenze umsebenzi ezikhexisayo.
Nginesiqiniseko sokuthi kuba kukhunjulwe kuwufanele nemizwelo olutholwa umuntu phakathi ukuya emkhathini. Uma uthola injabulo, injabulo eyaba khona, la amaphupho ebusuku wawusho uhambo emnandi. Kungenjalo ukubaluleka ngokwesiko kukhonjwe iphupho, lapho kukhona indiza emkhathini lapho "umphathi" ukulala zinexhala ngesikhathi emsebenzini waso. Kungenzeka ukuthi empilweni yangempela, umuntu ezama ukufihla kusukela izinkinga.
iphupho Negative - uhambo inyanga. Le ndaba ubikezela yesigemegeme ukubaluleka global, sibikezela izimpi, izifo, izinhlekelele zemvelo.
Yiziphi izindiza ephusheni, uma umuntu esebenzisa indlela yokuthutha ukunyakaza Abathakathi - umshanelo. Uma "indlovukazi" ebusuku amaphupho, eyayinesihloko umshanelo, ummeleli we-ubulili bubuhle, lithi empeleni uzama ukugcwalisa amandla isiyaphela. Abesilisa ukuthi umbono iyaya uma empilweni yangempela abajabuli ubuhlobo bawo okhethwe.
A iphupho elihle - uhambo ku nodrako. Lesi silo fabulous lifanekisela intando, amandla, amandla okubekezela. Kungenzeka ukuthi abavikela ophuphayo ezinethonya izovela esikhathini esizayo esiseduze, lapho uyoyinika lonkhe lusito labaludzingako. Nokho, uma umuntu uzama suka ku dragon samnqoba, empeleni kuphela elinde izifiso ezinganeni.
Flying ngamaphupho phezu ihlathi bathi ophuphayo maduze ukuvula imfihlakalo ngendlela evusa amadlingozi phakathi. Futhi, ungathola kuzo isimo esibucayi, beveza isixazululo yokudala inkinga. Ukubona edolobheni ngaphansi kwezinyawo zenu, ezimweni eziningi, ungakwazi ukujabulela kanye iphupho uthembisa ukuqashelwa okusheshayo. Uma umuzi phezu okuyinto izimpukane le "boss" wobuthongo, nezimvaba zonakale okwakwenzeka ezinjalo empeleni esiyibika amabhadi.
Futhi, umuntu angabona yena ephusheni elintantayo ehamba phezu kwamanzi. Ukuze siqonde okushiwo amaphupho Kulula, uma ukhumbula isimo kwesigubhu. Uma singcolile, angavaleki ophuphayo kusuka eziningi ngezindaba ezazisele zilenga, ubuhlobo ezimbi nomuntu kusukela circle kwangaphakathi. Hlanza, Echibini ecacile, ngakolunye uhlangothi, ibonisa ukuthi umuntu azimisele ngalo ukuvumelanisa ukukhanyiselwa kwangaphakathi alulali ngenkani ukulinda. Flying phezu kolwandle kubonisani esiya ngokuya siba sibi of umuzwa, kuyokusiza ukuba ugweme izingozi eziningi ekuphileni kwangempela, Israyeli ukunqoba izitha zabo.
Ozithandayo, iphupho nencazo Man: inshokutsi cazelo of phupha!
Dream Ukuhunyushwa - ukondla inja. inja White ngephupho. oneiromancy
Kungani dream of a ngesilevu ebusweni ntombazane? Kungani baphupha umuntu grey wentshebe?
Indlela tie hook kumbuthano futhi ukuhlobisa ikhaya lakho?
Nobhasikidi iphephandaba amashubhu, enziwe ngezandla zakhe
Jet wagxila kwaso indawo